The Most Popular Myanmar Social Network.
ပင်မစာမျက်နှာဧဒင်လက်ဆောင်ကဗျာလက်ဆောင်နီကိုရဲစာအုပ်များအကြည်တော်စာအုပ်များဗွီဒီယိုများMP3 သီချင်းများသူငယ်ချင်းများဖိတ်ရန်သင့်စာမျက်နှာယနေ့ကျော်ကြားမှု့များစည်းကမ်းချက်များအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့သားပုံများစိတ်ကြိုက်အမှတ်ပေးမယ်သီးသန့်အဖွဲ့များမလေးရှားရောက်မြန်မာများစင်္ကာပူရောက်မြန်မာများထိုင်းရောက်မြန်မာများတရုတ်ရောက်မြန်မာများအမေရိကန်ရောက်မြန်မာများမြန်မာနိုင်ငံမှ ဧဒင်ဘလော့များမေးရင်ဖြေမယ်ကွန်ပျူတာ မေးဖြေmobileဖုန်း မေးဖြေကျန်းမာရေး (Drမြတ်ကျော်)ဘောလုံးပွဲ မေးဖြေအင်တာနက် မေးဖြေsoftware မေးဖြေလူငယ် မေးဖြေကဗျာများကဗျာရေးရန်ဘောလုံးပွဲကဏ္ဍအများသုံးချတ်ဧဒင်ဗွီဒီယိုချတ်မြန်မာချက်WordPress
အဖွဲ့ဝင်များ - 99,000 နှင့် ..
Loading… Easy Download Links
Top News · Everything phyuzinoo commented on Paing Soe Thant's blog post အပျိုစင်"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်........ဖတ်ရှု့သွားပါတယ်နော်.."1 minute agoYu San shared soenyinyi's blog post on Facebook***ချစ်သူရည်းစားတို့ ရှောင်ကျဉ်ရမည့် (၁၂) ချက်***5 minutes agoko shwe latt commented on ကိုကိုနန်းညွန့်ဦး's blog post The Daily Eleven သတင်းစာပါ သတင်းဖော်ပြချက်ကို မှားယွင်းကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာက စွပ်စွဲရေးသား ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ The Daily Eleven သတင်းစာ၏ ကြေညာချက်"ထင်ယောင်ထင်မှား အရေးအသားနဲ့ လုပ်စားနေတာပါ။ မင်းတို့ပြောတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်တွေက တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ နေရာမှာပြောတာလား။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ရဲ့ အနှစ် သာရကို မပြင်မခြင်း ပြင်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား။လူတွေဖတ်ဖို့ထုတ်ရင် ထမင်းစားတဲ့ ဦးဏှောက် ကိုသုံးတာ…"7 minutes agohtethtetzin leftacomment for ခွန်ပအိုပေ"ဟိုင်း
"9 minutes agocherrykhin replied to မင်းတာရာ's discussion အလွမ်းငွေ့ "ကဗျာကကောင်းပါတယ်။"9 minutes agotway tway commented on Paing Soe Thant's blog post အပျိုစင်"ဒီလို ပညာပေး စာလေးတွေ မိန်းကလေးတွေ များများဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်"11 minutes agohtethtetzin leftacomment for ညဦးယံ"hi!
nay kaung lar?
"12 minutes agophyuzinoo commented on soenyinyi's blog post ***ချစ်သူရည်းစားတို့ ရှောင်ကျဉ်ရမည့် (၁၂) ချက်***"ကျေးဇူးပါ"14 minutes agoဥယျာဉ်မှူး ၃ liked မင်းတာရာ's discussion အလွမ်းငွေ့ 20 minutes agoမင်းတာရာ postedadiscussionအလွမ်းငွေ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ နှလုံးသားထဲကတစက်စက်ယိုထွက်စိမ့်ကျလာတဲ့ ဝေဒနာဒီ..တစ်တဘ၀ အတွက်မဟုတ်လောက်ဖူး..သံသရာပါမယ့်..အသိထူးထင်ပါရဲ့ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်..မင်းနဲ့ ပါတ်သက်လာခဲ့ရင်အတိတ်တွေက ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လို့ …..ကွယ်။တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာနေနေအမေအို…See More20 minutes ago 1
လွင်ပိုင်, ခွန်ပအိုပေ, agapelynn and 18 more joined ဧဒင်ဥယျာဉ်21 minutes agoစုမြတ်အေး liked ချစ်ငယ်'s blog post သားနှင့်ကား (ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ နည်းနည်းရှည်တဲ့အတွက် သည်းခံပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်စေချင်ပါတယ်)23 minutes agoစုမြတ်အေး commented on ချစ်ငယ်'s blog post သားနှင့်ကား (ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ နည်းနည်းရှည်တဲ့အတွက် သည်းခံပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်စေချင်ပါတယ်)"အရမ်းကောင်းတယ် မိဘတိုင်းသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်"24 minutes agoမာယာလမင်း commented on Paing Soe Thant's photoimage"ဟိုင်းသူငယ်ချင်းဖြစ်လို.ရမလား
"27 minutes agoမာန အလွမ်း postedadiscussionfb pwFb pw မေ့နေလို့ပြန်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးရှိရင်ကူညီပေးကြပါအုံးနော်သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုတကယ်အားကိုးပါတယ်ကူညီပြီးပြောပေးကြပါနော်ကျေးဇှုးအထူးတင်ပါတယ်......27 minutes ago 0
Hnin Ei San liked မုဒုံသားလေး's profile28 minutes ago More... RSS
မှားပြီနော် Added by ဇင်မင်းစို3းComments
Welcome to the online oasis .
ဧဒင်ဥယျာဉ်သည် မြန်မာလူမျိုးများအသုံးပြုသော လူမှု့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဝင်မည့်သူများအတွက် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် စည်းကမ်းများ
လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် သတ်မှတ်ချက်များရှိသည် ။
ဧဒင်ဥယျာဉ် စတင်တည်ထောင်စက စည်းကမ်းချက်မှာတစ်ခုတည်းသာရှိသည်
ထိုအရာသည် မြန်မာလူမျိုးပီသရန် တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည် ။
ယခု လိုအပ်သောစည်းကမ်းချက် အချို့ကို ဖြည့်စွက်ထားသော်လည်း
"မြန်မာလူမျိုးပီသပါ" ဆိုသော အချက်ကိုမူ မပြောင်းလဲပါ ။
ဧဒင်မှာ လိုက်နာရန် အချက်များကို အောက်တွင်သေချာစွာဖတ်ပါ
ယနေ့အဖွဲ့ဝင်အများဆုံးဖတ်သော ဘလော့များ Edit
Added by KONAING on June 18, 2013
ချစ်တတ်သောအမျိုးသားများ၏ အမူအကျင့် ၁၀၀
Added by soenyinyi on June 17, 2013
Added by yelattkoko on June 18, 2013
ယောင်္ကျားလေးများ ကြည့်သင်တယ်နော် (စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သော မိန်းကလေးများအတွက်မဟုတ် )
Added by ထူးချွန် on June 16, 2013
Added by Paing Soe Thant on June 17, 2013
***ချစ်သူရည်းစားတို့ ရှောင်ကျဉ်ရမည့် (၁၂) ချက်***
Added by soenyinyi on June 18, 2013
Android ဖုန်းတွေမှာ Facebook ကခဏခဏ Log Out ဖြစ်သွားတာကိုဖြေရှင်းကြမယ်
Added by ကိုကိုနန်းညွန့်ဦး on June 18, 2013
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှ အခက်အခဲများအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by poohack on June 27, 2012
Yes or No , Wh....questions များဖြေဆိုရေးသားနည်းများ။
Added by ZAY YAR WIN on June 18, 2013
Added by မူကြိုဆရာ on June 17, 2013
ကဗျာကဏ္ဍ - ကဗျာချစ်သူများအတွက်
ကဗျာစိတ်ပါဝင်စားသူအားလုံးအတွက် မြန်မာ့ အကြီးဆုံးကဗျာဖိုရမ် ။ 11778 discussions
ကျမ်းမာရေး မေးဖြေကဏ္ဍ (Dr မြတ်ကျော်)
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကျမ်းမာရေး အတွက် အထူးကဏ္ဍ။ 56 discussions
လူငယ် မေးဖြေကဏ္ဍ (ရွှေအိမ်စည်)
သတင်း မေးဖြေကဏ္ဍ (ခေတ်သစ်မြန်မာ)
Mobile ဖုန်း မေးဖြေ ကဏ္ဍ (IT GARDEN)
Fashion နှင့် အလှအပ မေးဖြေကဏ္ဍ ( NEW )
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးဖို့ မလေး အစိုးရကို တိုက်တွန်းမယ်
Posted by ♪♥ ♪ ပါပါလေး ♪♥ ♪ on June 19, 2013 at 12:460Comments
The Daily Eleven သတင်းစာပါ သတင်းဖော်ပြချက်ကို မှားယွင်းကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာက စွပ်စွဲရေးသား ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ The Daily Eleven သတင်းစာ၏ ကြေညာချက်
Posted by ကိုကိုနန်းညွန့်ဦး on June 19, 2013 at 11:02 1 Comment
ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်တဲ့လက်ဆောင် (၈)မျိုး
Posted by ကိုကိုနန်းညွန့်ဦး on June 19, 2013 at 10:490Comments
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးတဲ့အခါမှာ ဘာတွေကို သတိထားရမှာလဲ
Posted by နီနီ on June 19, 2013 at 10:170Comments
မြန်မာလူမျိုး ၅၀ ကို ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည် လက်မှတ်အတု ကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် မလေးရှားတွင် တရားစွဲ
Posted by aphyulay on June 19, 2013 at 6:17 1 Comment
Posted by မူကြိုဆရာ on June 19, 2013 at 5:300Comments
Posted by မူကြိုဆရာ on June 19, 2013 at 4:302Comments
အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀..မလဲအောင် ချိန်လို့ရတဲ့ လက်ကိုင်လေး။
Posted by TheinWai on June 19, 2013 at 4:230Comments
ကံကြီးရွာ ရဲ့ဈေးနေ့ လေး
Posted by ကြာဖြူနွယ် on June 19, 2013 at 0:000Comments
Posted by နေခရမ်း on June 18, 2013 at 22:510Comments
Posted by aphyulay on June 18, 2013 at 21:000Comments
င်္ဒီငွေစက္ကူ အတု ပြသနာက မိသူခံစတမ်း ဆိုတာမျိုး ပါလား------
Posted by aphyulay on June 18, 2013 at 21:002Comments
Posted by ♪♥ ♪ ပါပါလေး ♪♥ ♪ on June 18, 2013 at 19:560Comments
အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားက အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မယားပါမြေးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု အပါအ၀င် အသက်မပြည့် မိန်းကလေးငယ်များကို အဓမ္မမှု ရန်ကုန်တွင် တစ်ရက်တည်း ၃ မှုဖြစ်ပွား
Posted by aphyulay on June 18, 2013 at 19:280Comments
Posted by aphyulay on June 18, 2013 at 18:010Comments
View All ယနေ့ဖတ်စရာများ
© 2013 Created by ဥယျာဉ်မှူး. Badges | Report an Issue | Terms of Service